SIMSme - Android အတွက်သင့်ရဲ့လုံခြုံတမန် APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » SIMSme - သင်၏လုံခြုံတမန်
SIMSme - သင်၏လုံခြုံတမန် APK ကို
SIMSme နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းလုံးဝလုံခြုံနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ပါသည် - ဖြစ်နိုင်သောအဘယ်သူမျှမခိုးနားထောင်ခြင်း! Deutsche Post ကိုတို့ကအာမခံ - SIMSme အစစ်အမှန်အဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption ကိုအတူအခမဲ့ messenger ကို App ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု Download!
ပထမဦးဆုံးအတစ်သန်းအသုံးပြုသူများကိုမက်ဆေ့ခ်ျများအတွက် Self-သည်ပျက်စီးခြင်းအင်္ဂါရပ်အခမဲ့ access ကိုခံယူ!
SIMSme TÜViTနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. mediaTest ဒစ်ဂျစ်တယ်အားဖြင့်မြင့်မားလုံခြုံ apps များအဘို့ '' ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ App ကို '' တံဆိပျကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
# သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေကြိုက်နှစ်သက်ပါနဲ့, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုအစဉ်အမြဲအင်တာနက်ပေါ်ရှိလက်လှမ်းဖြစ်ချင်ကြသည်မဟုတ်လော
# သင်သည်ဒေတာလုံခြုံရေးတစ်ဦးမွငျ့မားဒီဂရီကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအခမဲ့ messenger ကိုရှာဖွေနေပါသလား?
# သင် encrypt လုပ်ထားစကားသံကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ပိုနှစ်သက်ပါသလား?
# သင်သည်အလုပ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းမလိုအပ်ပေမယ့်အစဉ်အလာချက်တင်န်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်များအတွက်လုံလောက်သောဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတျပါကွောငျးတှေ့သလား? သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်သွယ်ရေး encrypted ခံခဲ့ရလျှင်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့မလား?
# သင် unreservedly ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အတူယုံကြည်ကိုးစားနိုငျသောသင်တို့၏သားသမီးသုံးစွဲဖို့အတှကျဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေပါသလား?
SIMSme အပေါငျးတို့သသင်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်နှင့်အဆင့်မြင့် messaging app ကနေမျှော်လင့်ထားငှါငါလာသည်ဟု features တွေကမ်းလှမ်း - ပြီးအများကြီးပို:
အစစ်အမှန် END သည်-to-end encryption
သင့်ရဲ့ဒေတာကိုသင့်ဒေတာတွေကိုနေဆဲဖြစ်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့သူရဲ့ device ကိုအပေါ် encrypted နေကြသည်သာလက်ခံသူရဲ့ device ကိုအပေါ်စာဝှက်ဖြည်ထားတဲ့နိုင်ပါသည်။ တောင်မှကျနော်တို့က, အော်ပရေတာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများပေါ်တွင်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများမရှုမွငျနိုငျသညျ။
အစဉ်အလာကို SMS သို့မဟုတ်အခြားသံတမန်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်အခကြေးငွေအပေါ်သိမ်းဆည်းပါ။
self-DESTRUCTING MESSAGES များ
SIMSme နှင့်အတူ, သငျသညျတခုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲကိုသတ်မှတ်, သို့မဟုတ်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်အချိန်ကာလတခုအခြို့သောကာလအတွက်သာရရှိနိုင်အခြားအကြောင်းအရာများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ "Self-ယူဖျက်ဆီးခြင်း" အင်္ဂါရပ်ကိုအမှန်တကယ်ပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂလိကကိစ္စရပ်များစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်!
အသံ MESSAGES များ
ယခုတွင်သင်သည်လည်းသင်၏အဆက်အသွယ်စကားသံကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်ပါတယ် - ဖြစ်နိုင်သောအဘယ်သူမျှမခိုးနားထောင်ခြင်း!
ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အဆက်အသွယ်များနှင့်တည်နေရာ Send - encrypt လုပ်ထားတဲ့, သင်တန်း!
NO extra ဖုန်းစာအုပ်
SIMSme သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ကိုသင်ချိတ်ဆက်ဖို့သင့်ရဲ့ဖုန်း / လိပ်စာစာအုပ်အသုံးပြုသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစာအုပ်ထဲတွင်ဖုန်းနံပါတ်များကိုအမည်ဝှက်နှင့်စာဝှက်ထားတဲ့ထုံးစံ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူဒေတာဘေ့စနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင်သင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှစ်ဦးစလုံးရှာတှေ့နိုငျပါလျှင်တစ်ဦးကဆက်သွယ်မှုကိုသာတည်တတ်၏။ သေး SIMSme သုံးစွဲဖို့အထိလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီမဟုတ်သူကိုဆက်သွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာတွင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အာမခံ။
အဆိုပါ SIMSme ဆာဗာများကိုဂျာမနီမှာတည်ရှိသည်အဲဒီမှာနေထိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၏သင်တန်း, ဒီလည်းသင့်ရဲ့ဒေတာကိုဂျာမန်ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကိုင်တွယ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်!
SIMSme ယခု Download အပေါင်းတို့နှင့်အချိန်များတွင်ရက်စွဲအထိနေဖို့ - နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဝအသက်တာ၌။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကို, အကြံပေးချက်များသို့မဟုတ် SIMSme နှင့် ပတ်သက်. မှတ်ချက်ရှိပါသလား? ငါတို့သည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်! support@sims.me မှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်
အန်းဒရွိုက်လိုအပ်သည်: 4.0 နှင့်တက်
Deutsche Post ကို DHL: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
TamTam Messenger ကို ...
ဇွန်လ 6, 2015 မှာ 3: 02 နံနက်